भागरथी घटनामा दिनेशले ‘म होइन सरकारी कर्मचारी संलग्न छन्’ भन्दै दिए अर्को बयान, को हुन् ति सरकारी कर्मचारी ? « Gaunbeshi
भागरथी घटनामा दिनेशले ‘म होइन सरकारी कर्मचारी संलग्न छन्’ भन्दै दिए अर्को बयान, को हुन् ति सरकारी कर्मचारी ?
काठमाडौ । बैतडीकी भागरथी भट्ट घटनाका अभियुक्त दिनेश भट्टले पछिल्लो समय बयान फेरे पछि फेरी तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालतको आदेशमा उनी अहिले सुधार गृहमा छन् । सुधार गृहमा रहेका बेलामा उनले आफ्ना बुवालाई फोन गरेर घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका हुन् । त्यस पछि उनका बुवा सुधार गृहमा दिनेशलाई भेट्न समेत पुगेका थिए ।
प्रहरीकै अगाडी दिनेशले आफ्ना बुवासंग कुराकानी गर्दा पनि संलग्नता अस्वीकार गरेको उनका बुवाले पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका छन् । भागिरथी घटनापछि दिनेशको परिवार बैतडीबाट महेन्द्रनगर गएको छ । अहिले दिनेशले भने आफ्नै दिदीमाथि त्यस्तो घटना गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
दिनेश भट्ट यतिबेला दिपायलस्थित सुधारगृहमा छन् । प्रहरीले उनैले घटना गराएको भन्दै गरेको अनुसन्धानका आधारमा र्पुपक्षका लागि अदालतको आदेशमा सुधारगृह राखेको हो । तर, सुधारगृहमा रहेका दिनेशले यसअघिको बयान फेरेका छन् ।
प्रहरी अधिकारीहरुले त्यसलाई ‘सामान्य आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । ती अधिकारीले भने, ‘परिवारका सदस्यले छोरालाई जोगाउन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । किनभने परिवारमा केही गर्न सक्ने व्यक्ति ऊ मात्रै थियो ।
तर ऊ पनि अ प रा ध मा मुछिएपछि परिवारमा परेको चो टलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसबाहेक केही व्यक्ति वा समूह ती परिवारलाई उचालेर राजनीतिक र सामाजिक लाभ लिन खोज्ने पनि हुनसक्छन् । त्यसकारण त्यसलाई सामान्य ढङ्गले बुझ्नुपर्छ । तर यो विषय अदालतमा पुगिसकेको कारण मैले थप केही बताउन मिल्दैन ।’
दिनेशका बुवाले आफ्नो छोरा निर्दोष भएको मात्रै दाबी गरेका छैनन्, घटनामा स्थानीय वडा नम्बर–७ मै काम गर्ने वडाका कर्मचारीको संलग्नता रहेको विवादास्पद बयान समेत दिएका छन् ।
उनले आफ्नो छोरालाई ध म्का ए को फोन कल रेकर्डसमेत भएको दाबी गरेका छन् । पत्रकारले सुनौँ न त भन्दा अहिले सुनाउन नमिल्ने बताए । आफुसंग कुरा गर्दाको भिडियो समेत आफुसंग भएको दावी गरेका छन् । आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा सम्म सुनाउन नसक्ने बताए ।